Tsy rariny intsony ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara | Ny Valosoa Vaovao
Tsy rariny intsony ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara
Tsy rariny intsony ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara na an-tsaha na an-tanàna , na an-tanàn-dehibe na eny ambanivohitra. Saika isan’andro no ahitana vono sy faty olona amin’ny lahatsoratra an-gazety . Izany no iainan’ny Malagasy . Ny zavatra voamarika dia fihetsiketsehana ivelany no ataon’ny fitondrana fa tsy misy fiantraikany any amin’ny isambatan’olona izay lazaina fa fandraisana andraikitra ataon’ny mpitondra . Natao ny sarin’ady vao tsy ela akory izay , ekena fa ilaina izany saingy tsy hita izay fiantraikany , tsy maintsy misy vola laniana anefa amin’ireny sarin’ady ireny , tsy lazaina intsony ny fahamaroan’ny be galona eo anivon’ny Foloalindahy . Mirijarija ny mpitandro ny filaminana rehefa fetim-pirenena amin’ny fanaovana matso . Dia hoy ny fanontaniana manao hoe : inona no mahatonga ny tsy fandriampahalemana eto Madagasikara ary inona no vahaolana mifanandrify amin’izany ? Raha tsorina dia foana ny tsy fandriampahalemana raha tena ho foanana saingy tsy atao. Raha miteny hoe tsy ampy ny fitaovana ho an’ny mpitandro filaminana dia tsy olana izany fa mitady ny mpitondra satria izany no ipetrahany eo amin’ny toerany , tsy mpitondra fanjakana be taraina sy miala bala rahateo no napetraky ny vahoaka . Tsy fandraisana andraikitra no misy eto Madagsikara ary rehefa tena dinihana dia tsy fandraisana andraikitra fanahiniana no misy . Maro ny fitaovam-piadiana toy ny basy fampiasa any an-dakazerina no tratra eny amin’ny jiolahy saingy tsy fantatra ny tohin’ireny raharaha ireny ka inona moa no fandriampahalemana hisy amin’izany? Raha oharina amin’ny firenena atsy Afrika i Madagasikara dia azo hambara fa mbola vitsy mponina, noho izany dia tsy tokony ho sarotra ny fiarovana ny Malagasy 23 tapitrisa na eo aza ny fidadasik’i Madagsikara . Any amin’ny mpitondra fanjakana no hifatraran’ny riatra satria izy ireo no manana ny fahefana . Ny faran’ny herinandro teo dia nilaza ny ministry ny fiarovam-pirenena, ny jeneraly Rasolofonirina Béni Xavier, fa hofoanana ato anatin’ny 3 volana ny asan-dahalo any Ambohimahasoa sy ny manodidina, sy amin’ny lalam-pirenena faha-7 iny, dia ho hita eo indray izany, be izay 3 volana efa nampanantenaina izay, nefa tsy nisy tanteraka. Mila mandini-tena ihany ny fitondrana satria mahamenatra izany hoe mampihetsika miaramila marobe amin’ny fanakanana olona na antoko hanao fety kanefa ny vahoaka etsy endasin’ny jiolahy, hany ka lasa zary mandatsa ilay andalana ao anaty hirampirenena manao hoe : Hiadana sy ho finaritra! Sa ahoana hoy ianao ?